Imephu ikhombisa umoya ongcolile esiwuphefumulayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba inani labantu landa, kanjalo nokufunwa kwamandla, okungeke kube yinkinga enkulu empilweni yethu uma sikhetha amandla avuselelekayo, kepha, njengoba kungenjalo, umoya esiwuphefumulayo awuhlanzekile ngendlela ebesingaba ngayo. cabanga.
Ingosi ye-AirVisual ithuthukise imephu ye-3D exhumanayo yoMhlaba lapho ungabona ukuhamba kwemisinga yokungcola ikakhulukazi amazwe omhlaba.
Imephu ilula kakhulu futhi inembile ukuyisebenzisa. Ungabona ukuqondiswa kwezinhlayiya ezimisiwe, okungezilutho ngaphandle kwezinhlayiya eziqinile nezingamanzi ezibangelwa imisebenzi yabantu, enikezwa yizinguquko kumaza omoya. Lezi zimelwe futhi ebalazweni.
Ungayikhulisa bese uqhafaza endaweni ethile ukuthola ukuthi yimaphi amazinga wokungcola akuleyo ndawo ethile. Uma kuyisifunda esimakwe ngokubomvu, kusho ukuthi amazinga aphezulu kakhulu afinyelelwe kuleli qophelo; Ngakolunye uhlangothi, uma ibhalwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kuyosho ukuthi umoya uhlanzekile impela.
Ukuphefumula umoya ongcolile kunemiphumela yezempilo. Phakathi kweminye imiphumela, uma sichayeka emazingeni aphezulu singaba nezinkinga eziningi, ngoba ukungcoliswa kunga:
Khulisa izifo zenhliziyo nemithambo yokuphefumula.
Nciphisa isikhathi sokuphila.
Imbangela yokuguga okusheshayo kwamaphaphu, ngaleyo ndlela kwandise ingozi yomdlavuza.
Khulisa izifo zokuphefumula nezifo.
Dala izinkinga zamehlo.
Ngokwe-World Health Organisation (WHO), Abantu abangama-92% emhlabeni baphefumula umoya ongcolile, ebulala abantu abayizigidi ezintathu unyaka ngamunye. Ngalesi sizathu, kubaluleke kakhulu ukubheja ngamandla avuselelekayo, ahlanzeke kakhulu futhi ayingozi kakhulu. Ngaphandle kwalokho, inani lokufa kungenzeka likhuphuke njengoba inani labantu emhlabeni landa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Imephu ikhombisa umoya ongcolile esiwuphefumulayo